Inter Milan oo dooneysa inay si dhaqso ah kusoo qaadato xidiga reer Brazil Paulinho. - Caasimada Online
Home Warar Inter Milan oo dooneysa inay si dhaqso ah kusoo qaadato xidiga reer...
Inter Milan oo dooneysa inay si dhaqso ah kusoo qaadato xidiga reer Brazil Paulinho.
Inter Milan ayaa dooneysa inay soo qaadato ciyaaryahanka reer Brazil ee kooxda Corinthians Paulinho, kaasoo la sheegayo inay qiimo ku dhow 15 ilaa 20 milyan oo ginni kusoo iibsan doonto.
Nerazzurri ayaa sii qaadeysa wadadeeda ay ku raadsaneyso qadka dhexe, waxayna heshiis is afgarad ah la gaartay kooxda ciyaaryahanka ayeyna dooneysay inay kusoo qaadato 8 milyan oo ginni inta uusan go’aan ku gaarin inuu sii joogo Brazil.
Waxaa lasoo werinayaa inuu warkaani yahay keliya in labada koox ay wada xajoodeen, laakiin Inter ayaa rumeysay iyadoo sheegay inay si dhaqso ah kusoo qaadan doonto xidigaan.
Paulinho ayaa waxaa ku bixi kara marka loo fiirsho qiimaha ugu sareeya 20 milyan oo ginni, taasoo la filaayo inay noqoto lacagta uu kusoo caga dhigto San Siro Stadium.
24 jirkaan sidoo kale waxaa doonaya Chelsea, Real Madrid, PSG iyo Arsenal
“Inter ayaa iisoo dirtay dalab rasmi ah, taas waad ogtahay. Codsi ayaan usoo jeediyey ka dib waxaan go’aan ku gaaray inaan joogo Brazil. Laakiin inaan hada wadahadal kula jiro Chelsea, waxba kama jiraan,” Paulinho ayaa sidaasi u sheegay Foot365.
“Waan ku qanacsanahay Corinthians, ilaa iyo waqtigaan. Sidoo kale, waxaan ku leeyahay asxaab aan doonayo inaan kala qeyb galo koobka aduunka. Waana midaas sababtu. Waxaan diirada saarayaa inaan si wanaagsan u ciyaaro.”